सन्त बहादुर र पुकुलीले घरमा पटक्कै सुख शान्ति भएन भनेर कालीथानकी देवीलाई भाकल गरेअनुसार एकजोडी बोकापाठीको भोगदिन घरकै घोर्ली बाख्राका पाठापाठीलाई पानी हालेर भाकेका थिए ।
आज कालीथान जानेदिन । नुहाई धुहाई सकेर भाकल सामाग्री ठिक्क पारेपछि पाठा निकालेर सन्तेले डोरी समात्यो ।
जोडिपाठा आमालाई छोडेर एक्लै हिड्नु पर्दा सार्है डराएर कराए,घोर्लीले सान्त्वना दिदै कराई जाओ न जाओ आफ्नै मालिक मालिक्नीसँग त छौ नि पराईसँग छैनौ त ! भरे लिएर आईहाल्छन नि ? आमाको भरोसा लाग्दो बचन पाएर पेटेटे–पेटेटे गर्दै पाठा सन्तेका पछिलागे ।
भरे फर्किदा सन्ते रित्तोहात आएको देखेर घोर्लीको मुटु चस्कियो,उ आत्तिदै कराउन थाली । सन्तेले घोर्लीलाई कराउछस् ? भन्दै सिर्कनाले कुट्तै थियो यत्तिकैमा सन्तेको मोबाईल बज्यो, ‘हेलो ! को बोल्नु भो ?’ उताबाट जवाफ आयो, ‘हामी पुलिस डिपार्टको मान्छे बोलेको, अम्बर बहादुर तपाईको को हो ?’ भक्तेले अँध्यारो मनपार्दै भन्यो ‘मेरो छोरो हो हजुर,किन ? के भयो ? के गल्ती गर्यो उसले ?’ आत्तिएको स्वरमा सोध्यो ।
उताबाट आवाज आयो, ‘तपाईको छोरा सडक दुर्घटनामा परेर चिंन्ताजनक अवस्थामा छ ।’
सन्तेले खुईया गर्दै मेरो वावु भनेर डाको छोडेर करायो । उता पुकुलीले घरै उचालेर चिच्याउदै रून थाली । गोठका बाछापाडा,गाईगोरू ड्वाँ ड्वाँ गर्न थाले, काले कुकुरले आँगनमा ठाडो घाँटी लगाएर उ उ उ उ उ उ उ गरेर रून थाल्यो,खोरका बाख्रा पनि कराँउन थाले ।
सुन्ने र देख्ने जो कोहीलाई लाग्थ्यो सन्ते र पुकुलीको त्यो दर्दनाक दृश्यमा ति सबै सबै पशुहरूसमेत असैह्य वेदनाले भावविह्वल भएर रोईरहेका थिए ।
लधुकथा : प्रेम
ऊ हस्पिटलको बेडबाट भन्दै थियो । ‘अब निको भएर बिहे…
लघुकथाः मरेपछि खाउ बाबै केरा !
‘ए वावु ! हँ हँ हँ मलाई वाकल, छेकल के…
लघुकथा : जीवन यस्तै
लघुकथा : कालो भाले